Uqophe umlando owesifazane ngenkampani exuba amakhemikhali – Sivubela intuthuko Newspaper
UNKZ Nomandla Ngcoya eseduzane kukaMnu Ravi Pillay kusikwa i-ribbon kuvulwa isakhiwo sakhe.
UCHONYWE uphaphe legwalagwala owesifazane osemncane waseMgungundlovu oqunge isibindi wavula inkampani ekhiqiza izibulali-magciwane nemikhiqizo yokuhlanza enhlobonhlobo okungaba izitsha, izimoto nezindlu phansi.
UMnu Ravi Pillay ophathiswe uMnyango wokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natal uhalalisele uNkz Nomandla Ngcoya ovule inkampani ebizwa nge-D Chem Group ezinze enkabeni yedolobha laseMgungundlovu esebenzisa ulwazi lwakhe lwe Chemistry njengoba efunde wagogoda e-University of KwaZulu-Natal ngalo mkhakha.
UMnu Pillay obeyisimenywa esiqavile ekuvulweni kwale nkampani ubonge isibindi esikhonjiswe nguNkz Ngcoya evula le nkampani. Umfanise nomufi uNkk Charlotte Maxeke owayelelwela ukubona abesifazane bephumelela. “Ukube lokhu ukwenze ngesikhathi sokuphila kukaNkk Maxeke nginesiqiniseko ukuthi ngabe uyaziqhenya ngawe. Lokhu okwenze namhlanje kufakazele iziyalo ezishunyayelwa nguMnu Sihle Zikalala uNdunankulu waKwaZulu-Natal kokufukula umnotho wesifundazwe. Namhlanje sizoba ngofakazi ngesikubonile futhi okusihlabe umxhwele esifundazweni sethu. Sizwile ukuthi kule nkampani sekunabantu abaqashiwe lokho esikukhuthaza kakhulu siyisifundazwe saKwaZulu-Natal,” usho kanje.
UMnu Mthobisi Khumalo oyiMenenja yeDevelopment Services kuMasipala waseMsunduzi uthe umasipala wabo usekhaleni lokulekelela osomabhizinisi abancane ngokuthi ufake isandla lapho kudingeka khona. Uthe lesi yisiqalo esihle sikaNkz Ngcoya ngakho bewumasipala kumele bamfukule futhi bameseke. Naye uncome isibindi asikhombisile ngokuvula le nkampani futhi ebe ezixubela yena amakhemikhali ukuze lokhu akufunayo kuphumelele. “Osomabhizinisi abancane bahlezi bebambe iqhaza elikhulu enthuthukweni yaseMgungundlovu. Ngokubakhona kwale nkampani siyazi ukuthi kwanda amathuba okuqashwa kwabantu abasha lokho okwandisa namathuba omsebenzi. Umasipala waseMsunduzi ngaphansi kobuholi bukaMnu Mzimkhulu Thebolla buzishaya isifuba ngale ngqophamlando yale nkampani,” kusho yena.
UNkk Ngcoya ongumqondisi wayo le nkampani iD Chem Group uthe ushiye izinkampani ebezifuna azozisebenzela ebezimthembisa itshel lemali ngenyanga njengoba kukhona ebezibeka oR70 000 ngenyanga kodwa waqoma ukuziqalela okungokwakhe. “Leli bhizinisi ngiliqale ngoR1200 ngoba benginombono omuhle ngalo. Ngifuna likhule likapakele nakwamanye amazwe angomakhelwane beNingizimu Afrika. Ngibonga ukwesekwa yibona bonke abantu abebengemva kwami kusukela ekhaya, abangani nabafundi nabafundisi base-UKZN eMgungundlovu,” ubeke kanje.